Cheats Android - Androidsis | Androidsis (Bogga 3)
Tabaha si aad uga faa'iidaysato koontadaada Netflix
Raadi wax badan oo ku saabsan tabaha aan u isticmaali karno si aan uga faa'iideysano koontadayada 'Netflix' taleefankayaga Android.
Tabaha si fiican loogu isticmaalo taleefankaaga Android
Soo ogow shantaan tabaha fudud ee aad ugu adeegsan karto taleefankaaga Android habka ugu fiican oo aad khibrad fiican u yeelan karto.
4 tabaha si fiican loogu isticmaalo YouTube-ka Android
Soo ogow xulkan afarta khiyaano ah ee kuu oggolaan doona inaad si wanaagsan uga isticmaasho barnaamijka YouTube taleefankaaga Android.
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo rujin karo talaabadaada Android talaabo talaabo ah si aad ugu hesho Root marin kasta oo mobile ah ama kaniini ah isla markaana aadan u baahan PC.
Tabaha si aad uga hesho wax badan Facebook Messenger
Soo hel khiyaanooyinkan aad wax badan kaga heli karto Facebook Messenger. Xeelado fudud oo loogu talagalay barnaamijka Android.
3 Xeeladaha SwiftKey ee ay tahay inaad dhaqaajiso si aad u wanaajiso khibradaada qoraalka moobilkaaga
SwiftKey waa barnaamij kumbuyuutar oo aad u fiican xeeladahan ayaa naga dhigaya kuwo aad u raaxeysanaya markii aan wax qoraysid sheekaysiga, shabakadaha bulshada iyo inbadan.
Laba siyaabood oo wax badan looga helo NFC-da Android-kaaga. Soo hel khiyaanooyinkan fudud oo wax badan ka hel tiknoolajiyaddan.
Aaway ilo aan la aqoon oo ku jira Android Oreo iyo sida loogu rakibo barnaamijyada si nabadgelyo leh Android
Tutorial kaas oo aan ku tusayo meesha asalka aan la garaneyn ay kaga jiraan Android Oreo sidoo kale waxaan ku barayaa sida loo rakibo barnaamijyada si nabdoon
[APK] Xayeysiinta ugu fiican ee Block-ADS NO ROOT, xayeysiiska xayeysiiska webka, codsiyada iyo ciyaaraha
Xayeysiinta ugu fiican ee Block-ADS NO ROOT, oo ah barnaamij gebi ahaanba bilaash ah oo furan oo aad ku joojin karto xayeysiinta Android-kaaga,
Sida loo habeeyo muuqaalka Had iyo jeer ee Muuqaalka ee Samsung Galaxy S8
Si fiican uga faa'iideyso marwalba Muuqaalka Muuqaalka Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus cusub oo habee dhammaan xulashooyinkaaga
Khiyaamada lagu kasbado xawaaraha haddii aad tahay macmiil Yoigo ah wuu shaqeeyaa !!
Waxaan ku tusineynaa sida khiyaanada ah inaad xawaare ku hesho haddii aad tahay macaamiil Yoigo ah ay shaqeyneyso, iyo sidoo kale si dhab ah oo cajiib ah.
The ringtones ugu fiican, ringtones iyo ogeysiis aad Android
Maanta waxaan kugula talinayaa codsi bilaash ah kaas oo aan ka soo dejisanno dhawaaqyada ugu fiican iyo ogeysiiska gebi ahaanba bilaashka ah ee Android.
Maanta waxaan kuu keenaynaa xeelad si loo hagaajiyo xawaaraha Yoigo iyo in macaamiisheeda oo dhami ay helaan marinnada 800 Mhz iyo 2600 Mhz.
Codsi caan ah, maanta waxaan ku baraynaa sida loo rakibo loona isticmaalo Huawei Music, asalka asalka ah ee heesaha muusikada ee kuu ogolaanaya inaad kala soo baxdo muusikada bilaashka ah.
Google Chrome Trick: Sida looga raadiyo webka feylka sawirka
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa Trick Google Chrome cusub oo aan ku raadin doonno shabakadda feyl sawir leh.
Maanta waxaan sharxayaa sida loo qariyo Android Root iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo 'Xposed' si loogu raaxeysto barnaamijyada sida HBO Spain, Pokemon Go, iwm, iwm.
Gali oo soo hel sida loo soo dejiyo barnaamijyada dukaanka Play Store adigoon abuurin koonto Google ah.
Miyaad kala sooci kartaa asalka Samsung Galaxy S6 midka kale?
Xirmooyinka 'Samsung Galaxy S6' waxay gaareen jilitaan leh faahfaahin farsamo oo fara badan. Ma ka sooci kartaa iyaga asalka Samsung terminal-kii asalka ahaa?
5 xeeladood oo aadan ogeyn si aad uga faa iideysato dukaanka Google Play Store
Google Play Store waa mid ka mid ah barnaamijyada aan u tagno si aan uga helno waxyaabaha cusub. Shantaan khiyaano waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan.
Sida loo demiyo Warbixinta Samsung (akhristaha quudinta TouchWiz)
Maanta waxaan ku tusineynaa habka fudud ee loo raaco si loo baabi'iyo Warbixinta kooban ee Samsung akhristaha quudinta dhibsada ee lagu soo daray Touchwiz cusub.
Liiska Master-ka ee 150 + Google iyo Tabaha Android
Liiska in ka badan 150 tabaha loogu talagalay kuwa lagu bilaabay Android ama kuwa doonaya inay sare u qaadaan wax soo saarkooda Google.
Miyaad ka baqaysaa taleefankaaga? Talooyin wax ku ool ah iyo tabaha haddii ay dhacdo xatooyo
Xatooyada casriga ah ayaa aad u badan. Si looga hortago, waxaan kugula talineynaa codsiyada ugu fiican ee raadinaya taleefankaaga casriga ah meel kasta oo ay joogto.
10 tabaha si loo abuuro barnaamijyo guuleysta Android
In ka badan seddex milyan oo codsiyo ah dukaamada barnaamijka aad ayey u adag tahay in laga dhigo hal cod mid ka duwan kuwa kale.
5 khiyaano si aad uga faa'iidaysato sanduuqa Google
Sanduuqa Google ayaa la bilaabay dhowaan wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad ku maareyso habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah dhammaan waraaqaha ku soo dhaca sanduuqaaga
5 tabaha lagama maarmaanka u ah Android 5.0 Lollipop
Waxaan ku tusineynaa 5 tabaha lagama maarmaanka u ah Android 5.0 Lollipop si aad awood ugu yeelatid inaad qalabka ku furto smartwatch ama aad la qabato ogeysiisyada yimaada
Xeelad kale oo dib loogu cusbooneysiiyo WhatsApp bilaash ah hal sano oo dheeri ah
Halkan waxaa ah xeelad kale oo dib loogu cusbooneysiiyo WhatsApp bilaash hal sano oo dheeri ah.
Ku hagaaji waxqabadka Chrome xeeladdan fudud
Xeelad hagaajineysa waxqabadka Chrome ee loogu talagalay Android waxay ka timid isticmaale ku jira Reddit.
Sida loo ogaado haddii IMEI-ka mobilka uu noqon karo mid aan ansax ahayn oo laga yaabo in la xado
Markaan dooneyno inaan ku iibino terminal gacan labaad qiimo jaban, mararka qaar waxaan ka cabsi qabnaa in mobilada la xado. Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loo helo IMEI.
Gudaha Android-kaaga waxaa ku yaal Linux. Kaga bax Konsalka Taliska "Emulator Terminal Android"
Unugga Nidaamka Howlgalka ee Android waa Linux. > Aaway Linux on my Android? Emulator Terminal Emulator wuxuu ku qaadaa Linux Console Command
13 talooyin ama tabaha si aad nolol batteri dheer ugu hesho taleefankaaga casriga ah